Axmad Madobe oo sheegay in dowladda Federalka uu la shqeyn doono hadii markale dib loo doorto – Bandhiga
Axmad Madobe oo sheegay in dowladda Federalka uu la shqeyn doono hadii markale dib loo doorto
Madaxweynaha aan iscasilin ee hadane u tartamaya doorashada madaxtinimo ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta Magaalada Kismaayo ka jeediyay khudbaddiisa musharaxnimo ee ku saabsan waxa uu qaban doono ayaa sheegay in Dowladda Somaliya uu shaqayn doonaan siyaasadda dibadda ku saabsan.
Axmed Maxamed Islaam oo markale u taagan inuu qabto xafiiska madaxtooyada ayaa sheegay in tallaabo walba oo arrimaha dibadda ku aadan ay wada shaqayn kala yeelanayan Dowladda Federaalka.
“Arrimaha siyaasadda waxaan dooneynaa inaan Dowladda Federaalka Somaliya kala shaqayno talaabo walba oo dhanka horumarka loo qaadayo yaraynta baahida iyo daruufaha dadkeena, ka shaqeynta horumarinta bulshada ayaan ka wada shaqaynaynaa iyo dhammaan maamul wanaaga.” Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Arrimaha dib u dejinta dadka qaxootiga ka soo laabtay waxaan hubaa inaan ka faa’iidnay dadka dalka dib ugu soo laabtay oo ay shaqo wanaagsan ka hayaan hay’adaha dowladda, waxaan ka sii shaqayn doonnaa arrimaha dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed.”
Axmed Madoobe oo la rumeysan yahay in khilaaf xoogani uu kala dhaxeeyo Dowladda Federaalka ayaa tilmaamay in uu la shaqayn doono, waa haddii markale la soo doorto.